Muuri News Network » Guddoomiyihii Maxkamada G/Banaadir oo war culus ka soo saaray xilka qaadista Thaabit & Magacaabista..
Guddoomiyihii Maxkamada G/Banaadir oo war culus ka soo saaray xilka qaadista Thaabit & Magacaabista..
Jan 21, 2018 - Comments off
Guddoomiyihii hore ee Maxkamadda gobolka Banaadir Xaashi Cilmi Nuur oo la hadlay mid ka mid ah Warbaahinta Muqdisho ayaa ka hadlay go’aankii lagu Magacaabay mas’uuliyiinta cusub ee Maamulka gobolka Banaadir.
Waxaana uu shaaca ka qaaday in Madaxda Dowladdu ay xaq u leeyihiin in ay xilal magacaabaan, islamarkaana ciddii ay u arkaan in ay aysan ka soo bixi karin howsha loo igmaday ay xilka qaadis ku sameyn karaan.
Sidaas daraateed ayuu ugu baaqay shacabka Muqdisho in ay is dajiyaan, islamarkaan aya taageeraan hanaanka shuruucda dalka.
Dhinaca kale waxaa wax laga weydiiyay guddoomiyihii hore ee Maxkamadda gobolka Banaadir Xaashi Cilmi Nuur arrinta Maqaamka Muqdisho ayuu hoosta ka xariiqay in go’aan ka gaarirsta Maqaamka Caasimadda ay u taallo Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, islamarkaana ayasan jirin cid ay si gaar ah masuliyad uga saaran tahay.
Madaweynaha Soomaaliya ayaa Wareegta ka soo baxday xafiiskiisa waxaa lagu kala diray mas’uuliyintii hore ee Maamulka gobolka Banaadir, iyadoona xubno cusub loo Magacaabay xillalkaas.